Britain Archives - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုကို ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ အသုံးပြုရန် အတည်ပြုချက်ရရှိ
ဆန်းကျန့် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံက ထုတ်လုပ်ထားသော တတိယမျိုးဆက် အနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖို ဟွာလုံဝမ်း (Hualong One)ကို ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ အသုံးပြုရန် ပြည်စုံလုံလောက်ကြောင်း အတည်ပြုချက်ရရှိခဲ့သည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံ အထွေထွေ နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကော်ပိုရေးရှင်း(CGN) မှ ဒီဇိုင်းပညာရှင်က ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။...
လန်ဒန် ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှု ကိန်းဂဏန်များ ဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် သေဆုံးမှုပေါင်းသည် ယခုအခါ ၁၅၀,၀၀၀ (တစ်သိန်းခွဲ) ကျော်လာပြီ ဖြစ်သည်။ ကပ်ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရသည့် မိသားစုတစ်ခုက ၎င်းတို့တစ်အိမ်သားလုံးအပေါ် ကိုဗစ်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို မကြာသေးမီက ဆင်ဟွာသို့ ယခုလို...
လန်ဒန်၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ) ရာသီဥတု ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် အတူတကွ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန် ကုန်သွယ်ရေးသံမှူးကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua) …………………. (English Version) GLOBALink | Britain, China can work together...
Environment, Disasters & Accidents21 mins ago